KOLONTSAINA - FIALAMBOLY : Hanolotra 15 andro maimaimpoana ireo mpanjifany ny Canal +
Tsy mitsaha-mitondra zava-baovao ho an’ny mpanjifany ny Canal+, izay manana ny Tale Jeneraliny vaovao teratany Malagasy, Ramatoa Ramaherirariny Raharison fa hanolotra ny “Chaîne du Père Noel” indray amin’ity faran’ny taona ity. 14 décembre 2018
Izany hoe, manomboka izao ka hatramin’ny 31 desambra ao amin’ny Canal 99. Zavatra maro samihafa no hitan’ny mpanjifa amin’izany raha tsy haningana afa-tsy ny hoe ny fampianaran’ Ingahibe Noely, ohatra. Haharitra hatramin’ny 6 janoary io.
Ankoatra io, hahazo 15 andro amboniny ireo mpanjifa na efa teo aloha ka hanamafy indray na vao sambany no miditra ho mpanjifa dia hahazo 15 andro amboniny. Manginy fotsiny ny hanolorana ny “décodeur” maimaimpoana ho an’ny tolotra “Evasion”.
Raha tsiahivina ny taona 2018 ho an’ny Canal+ dia feno tolotra nahasondriana sy nahafinaritra ny mpanjifa tokoa raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny fiadiana ny tompondaka erantany teo amin’ny baolina kitra, ny tompondaka isan-tariky ny Uefa, ny lalao natrehin’ny Barea, ny Novegasy ary ny Iroko +.
Mbola ho hafa noho izany kosa ny amin’izao faran’ny taona izao araka ny nambaran’ny tompon’ andraikitra hatrany mba ho famaranana amin’ny fomba tsara sy mahafinaritra ny taona 2018.